milina fambolena - magazine "Potato System"
Tena Label milina fambolena
Label: milina fambolena
Mahazoa ny tapakila vintana amin'ny AGROSALON!
Ny fampirantiana ny milina sy fitaovana fambolena lehibe indrindra any Russia AGROSALON dia mandefa hetsika tsy mbola nisy toa azy! Manomboka amin'ny 20 aogositra ka hatramin'ny 1 septambra, misoratra anarana amin'ny tranokala ...
Ho an'ny milina fambolena amin'ny AGROSALON 2020
Ny fampirantiana ny milina sy ny fambolena lehibe indrindra any Rosia dia haneho betsaka ny zava-bita tsara indrindra amin'ny milina fambolena ivelany sy anatiny. Anisan'ireo zava-baovao, afaka mamboly ovy ...
Filohan'ny Vondron'ireo Rosiana Indrayista sy mpandraharaha: "Azoko antoka fa hotontosaina amin'ny haavo mahazatra ny YUGAGRO"
Ny filohan'ny Vondrona Rosiana misahana ny indostria sy ny mpandraharaha Alexander Nikolaevich Shokhin dia nandefa fiarahabana ireo mpandray anjara sy mpitsidika ny Fampirantiana Iraisam-pirenena faha-27, ...
Ny AGROSALON 2020 dia hatao amin'ny daty efa naorina teo aloha
Tamin'ny 10 Jona, nisy ny fivorian'ny komity fampirantiana ny fampirantiana manokana ny milina fambolena AGROSALON natao tao Moskoa. Amin'ny endrika video, mpikambana ao amin'ny komity fampirantiana sy ...
562 tapitrisa roubles dia nandany vola tamin'ny fanavaozana ny kompania ara-indostrialy any Udmurtia
Hatramin'ny fiandohan'ny taona dia 562 tapitrisa robla no natokana hanavao ny masinina sy ny traktera traktera ao Udmurtia. Ny Ministeran'ny Fambolena ao Udmurtia dia nitatitra fa amin'izao ...
188 tapitrisa rubles no azon'ny tantsaha Nizhny Novgorod avy amin'ny tetibola isam-paritra ho fanavaozana ny fitaovam-pambolena
“Mampiseho taha ambony amin'ny fampandrosoana ny vatan'ny indostrialy agro-indostrialy ao amin'ny faritra Nizhny Novgorod. Ny habetsaky ny vokatra amin'ny fambolena dia mitombo isan-taona - amin'ny faran'ny taona 2019, ny famokarana ny fambolena ...
Ny ovy atamai nampidirina tamin'ny CES 2020
Hetsika Fanamby Startup vaovao ho an'ny orinasa miteny Rosiana amin'ny sehatra Agritechnica Digital